Muummichi ministeeraa Itiyoopiyaa hojii tokkummaa mootummootaa faarsan
Fulbaana 29, 2015
Muummicha ministeera Itiyoopiyaa
Hoogganoonni addunyaa gumii tokkummaan mootummootaa waame irratti hirmaachuuf jecha New York keessatti wal ga'anii jiru. Muummichi ministeeraa Itiyoopiyaa obbo Haaylamaariyaam Dassaalen gumii sana irratti haasaa dhageesisaniin barri kun bara danda jedhanii tokkummaan mootummootaa erga hundeeffamee waggoota 70 lakkoofsisuu qofa utuu hin taane hojii gurguddaa hojjeteera jedhan.
Muummichi ministeera Itiyoopiyaa kun nagaa eegsisuun qooda biyyi isaanii fudhatte gama ilaaleen ennaa ibsan duraan waldaa mootummootaa miseensa itti taatee turte irraa deggersa kan dhorkamte walta'iinsa gareelee hedduun amantii kan hin dhabne Itiyoopyaan bu'uursitoota tokkummaa mootummootaa keessaa tokko ta'uu isheen kabajaatu nutti dhaga'ama jedhan.
Chaartara jaarmiyichaa keessa akka kaa'amee jirutti nagaa walii wajjin eeguun bu'aa akka qabu itti amanna jedhan. Qoodi Itiyoopiyaan gama nagaa eegsisuun qabdus obbo haayle Maariyaam ennaa ibnsan biyyi isaanii imala nagaa eegsisuu kan tokkummaa mootummootaa keessatti sochii gootuun loltoota ishee heddumminaan bobbaasuun sadarkaa lammaffaa irra jiraachuun ishee garaa nu ciibsa jedhan.
Haasaa muummichi ministeeraa Itiyoopiyaa kora Tokkummaa mootummootaa irratti dhiyeessan
Filannoo biyyaalessaa Itiyoophiyaa Marsaa 6ffaa, Finfinnee
Filannoo Laalchisee Yaada Jiraattotaa fi Paartii Siyaasaa Mormituu Tigraay Keessaa
Filannoon Kun Kan Nuti Walii Gallee Itiyoopiyaa Maraaf Mijattu Itti Uumuu Dha: Prezidaant Saahilewerq Zewudee
Haala Adeemsa Filannoo, Magaalaa Adaamatti